आहा रारा गोल्डकप : डेढ दशकपछि मनाङ र पुलिस फाइनलमा भिड्दै SULSULE:A Truly Nepali News Portal
२०७६ फागुन ३० मा प्रकाशित
कास्की, फागुन ३०
क्याराभान पुलिस तथा दोस्रो र तेस्रो संस्करणको उपाधि मनाङले जितेको थियो । आहा रारामा मनाङ र पुलिस वि.सं. २०६८ को दशौँ संस्करणको क्वार्टरफाइनल तथा बाह्रौँ संस्करणको सेमिफाइनलमा समेत प्रतिस्पर्धा गरेकामा दुवैमा मनाङ विजयी भयो । दुवै टोली आहा राराका सफल क्लब हुन् । पुलिसले ‘क्याराभान’ गोल्डकपसहित हालसम्म छ पटक उपाधि उचाल्दा मनाङले पाँच पटक उपाधि चुम्न सफल भएको छ । विभागीय टोली पुलिसले क्याराभानसहित वि.सं. २०५९ को पहिलो, २०६४ को छैटौँ, २०६५ मा सातौँ, २०६६ को आठौँ र २०७४ को सोह्रौँ संस्करणको उपाधि आफ्नो पोल्टामा पारेको छ ।
मनाङ वि.सं. २०६० को दोस्रो, वि.सं. २०६१ मा तेस्रो, २०६८ को दशौँ, वि.सं. २०७२ मा चौधौँ र २०७३ को पन्धौँ गरी हालसम्म पाँच पटक च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ । जारी संस्करणमा पुलिसले क्वाटरफाइनलमा आयोजक सहारालाई टाइब्रेकरमा ४–२ तथा सेमिफाइनलमा थ्रीस्टार क्लबलाई ३–० ले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
मनाङले क्वाटरफाइनलमा झापामाथि १–० तथा सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि ३–२ को जीत निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो । यस वर्ष शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा मनाङले पुलिसलाई २–० ले हराएको थियो । त्यसलगत्तै धरानमा भएको बुढासुब्बा गोल्डकपको फाइनलमा पुलिसको ‘बी’ टोली मनाङसँग ३–१ ले पराजित भएको थियो ।
शनिबार हुने फाइनल खेल अघि आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै टोलीका प्रशिक्षक तथा कप्तानले राम्रो फुटबल खेल्दै प्राप्त अवसरको सदुपयोग गरेर उपाधि जित्ने दाबी गरेका छन् । पुलिसका प्रशिक्षक अनन्त थापाले मनाङ राम्रो टोली रहे पनि आफ्ना खेलाडीले मेहनत गरेर उपाधिका लागि खेल्ने बताए ।
टोलीमा कोही पनि खेलाडी घाइते नरहेको बताउँदै उनले युवा टोलीले निर्धारित समयभित्रमा नै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी खेल्ने उनको भनाइ छ । “मनाङ राम्रो क्लब हो, फाइनल खेल जहिले पनि फिप्टी÷फिप्टी हुन्छ, हाम्रा खेलाडी भोलि गतिका साथ उपाधि जित्ने गरी मैदानमा उत्रिने छन्”, थापाले भने । मनाङका प्रशिक्षक फुजा टोपेले आक्रामक फुटबल खेल्दै उपाधि चुम्ने टोलीको लक्ष्य रहेको बताए । पोखरेली मैदानमा टोलीलाई समर्थकको समेत साथ मिल्ने विश्वास उनको छ ।
मनाङका कप्तान कमल श्रेष्ठले सेमिफाइनलमा आर्मीलाई पराजित गर्दा टोलीको मनोवल उच्च रहेकाले समेत अघिल्लो दिनको जस्तै प्रदर्शन फाइलनमा दोहो-याउँदै उपाधि जित्ने उल्लेख गरे । पुलिसका कप्तान भरत शाहले फाइनलको यात्रासम्म युवा टोलीले राम्रो नतिजा निकालेकाले शनिबारको खेलमा समेत राम्रो फुटबल पस्किँदै दर्शकको मन जित्ने र समर्थन प्राप्त गर्ने गरी खेल्ने बताए ।
प्रतियोगिताको विजेताले रु. १० लाख एक हजार तथा उपविजेताले रु. पाँच लाख एक हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एक थान स्कुटर तथा सर्वाधिक गोलकर्ताले रु. २५ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेण्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड र प्रशिक्षकलाई जनही रु. १५ हजारका दरले पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।